Tamberin’andraikitra, fampandraisana andraikitra… | NewsMada
Tamberin’andraikitra, fampandraisana andraikitra…
Tato ho ato, tsy mitsaha-mihena ny taham-pandraisana anjaran’ny mpifidy isaky ny fifidianana. Nahoana? Maro no antony. Anisan’izany, ohatra, ny hoe tsy fahatokisana intsony ny mpanao politika sy ny mpitondra. Tsy inona fa fahatofohana, tsy firaharahana… Inona no atao amin’ity hoe fanovana?
Tsy matoky ny mpanao politika sy ny mpitondra hatramin’izay ny olom-pirenena? Maro koa no anton’izany. Eo, ohatra, ny hoe tsy hita izay vita. Fitadiavana sy fiadiana tombontsoa manokana tsinona no zava-dehibe sy mahamaika. Tsy hita loatra izay tena fitsinjovana ny fiainan’ny vahoaka ifotony.
Inona ny vahaolana? Marina ny hoe mila fanabeazana ny olom-pirenena havitrika amin’ny fandraisana anjara amin’ny raharaham-pirenena. Anisan’ny lehibe sy voalohany amin’izany ny fifidianana. Vitan’izay ve? Na mila miova sy manova ny fanaony hatramin’izay koa ny mpanao politika sy ny mpitondra…
Sao mba efa fanairana, na fitarihan-dalana sy fanabeazana, ny mpanao politika sy ny mpitondra mba hiova lalana sy fomba fanao izao taham-pahavitrihan’ny mpifidy tsy mitsaha-mihena izao? Ny tany aloha no nanao ny nataony, ka ny amin’izao fotoana izao no
tratran’ny fanairana sy ny fanitsiana.
Mitaky fiovana sy fanovana ny vahoaka vao hihetsika? Anisan’izany ny fisitrahana asa mivaingana, araka izay tena hetahetany sy mahasoa azy. Na fanatanterahana izay nampanantenaina… Tsy inona fa tamberin’andraikitra amin’ny hoe fampandrosoana tafapaka any amin’ny vahoaka ifotony.
Sao ny tsy fisiana sy ny tsy fahitana izany mazava no mampalaina ny vahoaka mandray anjara amin’ny raharaham-pirenena? Eny, na ny amin’ny fifidianana ihany aza. Raha misy ny tamberin’andraikitra, hanaraka ho azy ny fahavitrihana amin’ny fampandraisana anjara ny vahoaka amin’ny hoe fampandrosoana?
Mila tamberin’andraikitra amin’izay ny vahoaka, raha tiana handray anjara amin’ny raharaham-pirenena. Ao anatin’izany ny fifidianana isan’ambaratonga. Mby aiza àry? Firosoana amin’ny hoe fiovana sy fanovana izao…